Uwe eji edozi Ugwu salad maka iwelata ibu - mgbake
Mbido » blog » Uwe eji edozi edozi elu salad maka ịdị arọ
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe kachasị mma maka mgbakwasa salad maka ụkọ ọnwụ ma kesaa ụfọdụ ndụmọdụ banyere ihe ndị ị ga-eji na salads gị iji nyere aka mee ka metabolism gị dịkwuo mma.
Ndụmọdụ ndị a sitere na Abolme nri ndị edemede Dave Ruel & Karine Losier.
Ndị a bụ nri mgbakwasa salad dị mma ị nwere ike iji:
All Dijon Mustard nwere ike nwee mmetụta dị ukwuu na sistemụ metabolic gị, ọbụlagodi mgbe izu ike, yana iwelie nri nri na nri ka mma.
Apple Cider Vinegar na-enyere aka maka iwelata ibu site na iwepụ imeju, na-eme ka usoro metabolic dị ala, na-ebelata ọkwa agụụ!
E kpughere ọcha na mmanya ọcha Vinegar iji mee ka ọkwa shuga dị n'ọbara, belata insulin yana iji gwuo nri ngwa ngwa.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, ahịhịa na ngwa nri ndị ọzọ dịka ginger, galik, lemon, cayenne, thyme, basil, na parsley egosila n'ezie na ha nwere nnukwu metabolism-na-akwalite akụrụngwa ka ha na-akpali gị uto buut!
Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ị mụrụ ka esi esi nri ndị kachasị mma esi esi nri, ị ga - ebido n’inwe obi ụtọ na akụrụngwa na - agbaze abụba na ụtọ kachasị nke nri ị na - eji na - ete akwa.
Kedu nke bụ kpọmkwem ihe Dave na Karine gbakọtara n'ezie na usoro nri nri nri metabolic - ihe karịrị 250 na-atọ ụtọ, nri-abụba-nri ị ga-ahọrọ. Na ndammana, ha nwere a dịgasị iche iche nke metabolism boosting salad Ezi ntụziaka ịhọrọ site na!
Lelee ya ebe a:
250+ Savory Metabolic Isi nri efere <——- Ngwa & Mfe!
Na mgbakwunye na ịgbaso usoro nri dị mma, mmega ahụ dịkwa mkpa oge niile. Ọ bụrụ n’ịkpa ime cardio, ịgba ọsọ bụ ụzọ dị mma iji gbaa abụba anụ ọkụ.
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu gụnyere ndị ọgba ọsọ na-eji mgbakwunye preworkout eme ka ike ha dị elu. Ọ bụrụ n ’ị na-eche maka iji mgbakwụnye ihe mgbe ochie maka ike, lee na mmetụta nke tupu mgbatị ahụ tupu ịgba ọsọ
Anyị na-atụ anya na ị nụrụ n’okwu a! Mee ka anyị mata echiche gị na nkọwa ndị dị n'okpuru
January 10, 2020 Admin blog Enweghị asịsa